Sawirro: Taliyaha AFRICOM oo qiimeeyey sida uu arko DF kadib markii Farmaajo uu kula kulmay Muqdisho | Arrimaha Bulshada
Home News Sawirro: Taliyaha AFRICOM oo qiimeeyey sida uu arko DF kadib markii Farmaajo uu kula kulmay Muqdisho
Sawirro: Taliyaha AFRICOM oo qiimeeyey sida uu arko DF kadib markii Farmaajo uu kula kulmay Muqdisho
Bulsha:- Taliyaha ciidadmada Mareykanka ee AFRICOM Gen. Thomas D. Waldhauser ayaa la shaaciyey inuu booqasho ku yimid magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya talaadadii shalay ahayd.
Intii lagu guda jiray booqashada ayaa Waldhauser waxa uu la kulmay madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo sarakaiil sare oo ka mid ah ciidamada Soomaaliya.
“AFRICOM iyo dowladda Mareykanka waxa ay taageerayaan dowladda Soomaaliya iyo dadka Soomaalida ah, ayaga oo gacan ka siinaya dadaalka horumar waara iyo xasilooni amni looga hir-gelinayo Soomaaliya” ayaa lagu yiri qoraal kasoo baxay AFRICOM.
“Waxaan ku faraxsanahay xiriirka xooggan ee aan la leenahay madaxweyne Farmaajo iyo dowladdiisa” ayii yiri Gen. Thomas D. Waldhauser.
Waxa uu intaas ku daray in “Farmaajo iyo maamulkiisa ay horumar wanaagsan ka sameeyeen Soomaaliya ayna caddahay in hadafkoodu yahay nabad xasilooni iyo horumar ka dhaca Soomaaliya”.
AFRICOM ayaa sheegtay in siyaasadda dowladda Mareykanka ay tahay in Soomaaliya ay ka dhaceen xasilooni siyaasadeed iyo mid dhaqaale.
Dhinaca kale Gen. Thomas D. Waldhauser ayaa sheegay in wax kasta oo Soomaaliya ay ka sameeyaan ay ku fuliyaan codsiga dowladda Soomaaliya taasina ay qeyb ka tahay caawimaada siyaasadeed iyo midda dhaqaale ee Wasaaradda Arrimaha Dibedda Mareykanka ay ugu talo-gashay Soomaaliya.